10 Arụrụ n’ụlọ Mma Mma Maka anụ na-egbukepụ egbukepụ - Akpụkpọ Anụ
Nyocha Nyocha Ngwọta Homelọ Nddị Mma Agbamakwụkwọ Kichin Na-Adịgide Adịgide Nke Nrụgide Ihe Ndozi Teknụzụ Ọrụ & Ego Olee Otú Iji
10 Arụrụ n’ụlọ Mma Mma Maka anụ na-egbukepụ egbukepụ
Ifufe nke oge oyi na-apụnara gị akpụkpọ gị na-enwu gbaa, na-eme ka ịchọọ ịkwado ọbụna ude mmiri na ude. Ma olee uru itinye ego na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ bara uru nke ọtụtụ puku rupees mgbe ihe kachasị mma iji nweta akpụkpọ anụ na-enwu gbaa niile dị na pant gị? Ọbụna na-enweghị oge oyi, na-enwu gbaa akpụkpọ ahụ siri ike iji nweta n'ihi ọtụtụ nsogbu, sitere na site na dullness na nkụ na pịmpụl na ihe otutu.
Agbanyeghị, lee usoro ọgwụgwọ 10 a na-arụ n’ụlọ na ndụmọdụ ga-enyere gị aka iru na-enwu gbaa n'ụlọ . Ihe ndị a niile kwesịrị ịdịrị gị mfe, yana itinye n'ọrụ na ojiji ha dịkwa mfe. Lelee ihe ndị a maka anụ na-enwu gbaa.
abụọ. Ha na-esusu ọnụ
Anọ. Mmiri Rose
5. Mmanụ a .ụ
6. Ube oyibo
7. Epe oroma
8. Aki oyibo
iri na otu. Ajụjụ Banyere Akpụkpọ anụ
Ngwurugwu a dị ka ọla edo, nyere uru ọ ga-ewetara gị. Nke mbụ, turmeric bara ọgaranya na nje na-egbochi nje yana antioxidants. Ihe ndị a bụ ihe achọrọ iji nweta akpụkpọ anụ na-enwu gbaa, dị ka Pharm Easy. Ọzọkwa, turmeric nwekwara curcumin, ihe mgbochi mkpali gị n'ụlọnga nke nwere ike inyere gị aka tufuo puffiness na etuto. Turmeric nwekwara ike inyere aka ịkwụsị akpụkpọ anụ dull yana mee ka ọ dị ọhụrụ, dịka akụkọ.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Mgbe ị na-agwakọta ngaji nke turmeric na mmiri ara ehi dị ka ihe ọ drinkụ drinkụ nwere ike inyere aka ịkwalite ọgụ gị na ahụike dị n'ime, iji ya dị ka mkpọ ihu nwere ike inye aka chebe ahụike nke akpụkpọ gị . Gwakọta teaspoon nke turmeric na ntụ ọka chickpea na mmiri ara ehi maka mkpọ ihu. Ma ọ bụ jikọta teaspoon nke turmeric nke ngaji na ngaji mmanụ a honeyụ na tablespoons abụọ nke mmiri ara ehi maka ọkụ na-enwu gbaa.
Ha na-esusu ọnụ
Dabere na BeBeautiful.in , exfoliating gị akpụkpọ bụ otu ihe mbụ ndị mmadụ kwesịrị ime iji nweta enwu gbaa. Besan, ma ọ bụ ntụ ọka chickpea, na-eme dị ka a oké eke exfoliator nke ahụ na-enyere aka iwepụ mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ. Nke a pụtara na akwa ọhụrụ nke anụ ahụ gị na-abanye na egwuregwu, nke ga-eme ka ị na-enwu gbaa. Zọ kachasị mma iji besan bụ itinye ya na nkpuchi ụlọ dị mfe.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Might nwere ike icheta ọfụma maka iji bekee gwakọta n'ọnọdụ ncha dịka nwatakịrị. Ya mere, banyeghachi na agụụ ahụ ma mepụta pasta site na iji tii abụọ nke bean na otu ngaji nke ude (malai), ma tinye ya dị ka ihe nkpuchi ihu. Nke a, dịka ị maara, enwere ike itinye ya n'ọrụ na ahụ niile.
Ndị mmadụ ejiriwo aloe vera mee ihe maka ọtụtụ puku afọ maka ịgwọ ọrịa na nro nro. A na - ahụ ya n'ọtụtụ ọgwụgwọ na - agwọ ọrịa anụ ahụ nke ụdị ọ bụla. Ọ nwere vitamin na antioxidants na-anaghị akwụsị inye gị akpụkpọ na-enwu gbaa kamakwa na-enyere aka igbochi ihe otutu na wrinkles, na-eme ka akpụkpọ ahụ nwee mmiri ma meziwanye ya. N'ezie, ọ bụrụ na anwụ anwụ na-acha gị, ọ nweghị ọgwụgwọ ka mma karịa ngwa aloe vera.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Aloe vera bụ otu ụdị osisi akụpụtara nwere ike too ngwa ngwa ebe ọ bụla - na terrace ma ọ bụ windo windo gị. Can nwere ike iji ya site na ịkpụ otu akwukwo, mebie gel ya ma tinye ya n'ihu gị. Hapụ ya maka nkeji iri na ise, gị onwe gị’Gị na gị ụzọna-enwu gbaa na akpụkpọ ahụ siri ike. Nwere ike iji ya n'ọtụtụ masks ihu ihu n'ụlọ Ọzọkwa.
Anyị niile maara isi ihe atọ ahụ usoro nlekọta anụ ahụ : nhicha, toning na moisturizing. Toning na-enyere aka wepu ihe ruru unyi na ihe ojoo hapuru n’iru gi mgbe asachara. Ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ ịkwụsị iji kemịkal, bilie mmiri dị ka eke akpụkpọ anụ. Ọ bụghị naanị na ọ naghị esi isi, ọ na-eme ka akpụkpọ gị nwee ume ọhụrụ.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Wunye obere karama ịgba mmiri na mmiri rose. Buru ya gburugburu n’akpa gị ma ọ bụ n’oge njem ogologo njem gaa spritz na ihu gị. Ga-enweta ume ozugbo.
Ngwunye ọlaedo a dị mma maka ahụike gị mgbe ewere ya n'ime na mpụga. Mmanụ a Honụ na-arụ ọrụ dị ka ezigbo moisturizer. Ọ nwere ọtụtụ ihe nje na-egbochi nje nwere ike igbochi ọrịa na bekee belata scars na etuto, na-enye gị agba ntụpọ na-enweghị ntụpọ. O nwekwara ihe ndi na-achapu oria nke na enyere aka ichikota pigmentation ma nwee ike ịhapụ gi aru oku.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Ọ bụrụ na ntụpọ gbara ọchịchịrị na-eguzo n'etiti gị na anụ na-acha ọkụ, nwalee mkpuchi ihu a: Were otu tablespoon ọ bụla nke aloe Vera, mmanụ a honeyụ na ihe ọ juiceụ juiceụ lemon . Tinye na akpụkpọ gị, hapụ maka minit 10, ma jiri mmiri luara seara sachaa. Iji nke a n’oge etiti oge nwere ike inye gị ụfọdụ nsonaazụ na-enweghị atụ.
Avocados na-atọ ụtọ n'ụdị ọ bụla. Otú ọ dị, ị maara na ube oyibo nwere oké akpụkpọ uru dị ka nke ọma? Mkpụrụ osisi ahụ bara ọgaranya na antioxidants ma nwee ndị na-egbochi ọrịa mkpali. O nwere ike inye aka na ọtụtụ nsogbu derma dị ka akpụkpọ akọrọ, anụ ahụ mebiri emebi, yana akpụkpọ anụ adọtara, na ndị ọzọ.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Nweta anụ ahụ na-enwu gbaa ya na nkpuchi ime ulo di nfe ma di nfe: belata ube oyibo iberibe ma jiri ndu ya mebie ya. Tinye otu ngaji nke mmanụ ube oyibo, gwakọta nke ọma, tinye ya na akpụkpọ akọrọ. Jiri mmiri keara ara saa afterara afterara minutesara mgbe nkeji iri na ise maka ọkụ na-ekpo ọkụ.
Oroma bu ezigbo uzo vitamin C , nke na-enyere aka na nrụpụ. Consumption consumptionụ oroma mgbe niile dị ka mkpụrụ osisi ma ọ bụ ọbụna n’ụdị ihe ọ juiceụ juiceụ nwere ike inyere gị aka tufuo toxins ma mee ka ahụ gị dị ọhụrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ọgwụgwọ ezubere iche, ị nwere ike iji bee oroma n'ụzọ dị iche iche. Maka ndị mbido, ọ na-egbochi uto nke melanin, nke nwere ike, n'aka nke ya, nye gị anụ ahụ na-enwu gbaa.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Ghichaa bee nke otu oroma na otu tablespoon nke mmiri rose, ma tinye mado ahụ na anụ ahụ dị mmiri mmiri. Hapụ maka nkeji 10 wee sachaa. Jide n'aka na ị gaghị ekwe ka ọ bata na anya gị.
Site na ntutu ruo n'ụkwụ, ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla dị na mpụga, mmanụ aki oyibo nwere ike inyere gị aka na ha! Ọfụma na-ekpuchi akpụkpọ gị ma na-ahapụ ya dịka nke ahụ nwere ike iduga akpụkpọ anụ, nnukwu oghere na ọtụtụ nsogbu anụ ahụ ndị ọzọ. Ọ dịkwa oke mkpa ka ị gwọọ mmiri mgbe ikpochapụrụ, a makwa mmanụ mmanụ oyibo maka ihe ndị na-eme ka mmiri sie ike. Dabere na Pharm Easy, o nwere antioxidants na fatty acids ma nwee ike belata mbufụt na otutu. O nwekwara ike ime dị ka ezigbo moisturizer, na-ehicha na sunscreen. Tinye ihe ndị a niile, ma ị nwere ike na-enwu gbaa .
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Ọ bụrụ na ọ dị gị ka moisturizer gị adịghị ezu mmiri zuru ezu, egbula karama ahụ dum. Kama, mgbe ị sachara ahụ́ ọ bụla, gwakọta mmanụ ole na ole na mgbapụta ọ bụla nke moisturizer gị ma hichaa ya. Akpụkpọ gị ga-ahapụ gị ọmarịcha ọmarịcha ahụike.
Mgbe anyị na-eche banyere kukumba na nlekọta anụ ahụ, uche anyị na-ebu ụzọ tinye mpekere na anya n'oge ihu. Ihe kpatara nke a abụghị naanị n'ihi ihe jụrụ oyi nke akwukwo nri a nwere, ọ nwekwara ọkwa pH dịka akpụkpọ ahụ anyị, n'ihi ya, ọ na - enyere aka mejupụta akwa nchekwa anụ ahụ, tufuo ọchịchịrị ma ọ bụ akpụkpọ anụ, ma belata ọzịza ma ọ bụ puplel.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Were otu kukumba na ngaji yogọt abụọ ma ọ bụ atọ. Ghichaa kukumba ahụ na mado na mbụ, wee gwakọta ya nke ọma na yogọt. Tinye pasta a na ihu na olu gị, ma hapụ ya maka 10 nkeji. Jiri mmiri oyi sachaa. Ọ dị mma dịka ịnweta ọgwụgwọ dị oke ọnụ na-eme na salon, ma na-enweghị kemịkal.
Ka oge na-aga, ị ga-ahụla ọtụtụ ederede na mgbasa ozi mgbasa ozi na-akpọsa kọfị scrubs . Nke a bụ n'ihi na kọfị na-enweta aha dị ka ihe mgwa maka ọgwụgwọ anụahụ. Elixir ume gị n'ụtụtụ bụ ọgaranya na antioxidants, nke nwere phenols na-enyere aka ịlụ ọgụ ihe ndị mba ọzọ nwere ike imebi akpụkpọ gị.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Gwakọta otu ngaji kọfị na otu ngaji mmanụ a honeyụ, tinye ya na ihu na olu. Mgbe kọfị exfoliates, mmanụ a honeyụ moisturises, si otú enyere gị nweta na-egbukepụ egbukepụ akpụkpọ ị'nana-achọkarị. Enwere ike itinye ihe nkpuchi a n'ahụ niile.
Ajụjụ Banyere Akpụkpọ anụ
Q Gịnị bụ ihe nzuzo na-enwu gbaa anụ?
.B.. Abụọ okwu: Exfoliate na moisturise. Ihe bu isi a ghotara banyere akpukpo aru bu na mgbe oge n’acho, akpukpo aru anyi gha emebi emebi n’ihi otutu ihe, ma nke ozo ma n’ime. Nanị ụzọ ị ga - esi nweta akpụkpọ anụ na - enwu enwu bụ ịsacha mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ site na akwa oyi akwa nwere exfoliator ma ọ bụ na-ehichasị wee moisturise akpụkpọ gị iji mechie pores gị, kpoo anụ ahụ gị, ma mepụta akwa nchekwa megide ihe ndị nwere onwe ha. Ime nke a dị ka omume ị na-eme kwa ụbọchị agaghị enye naanị gị anụ na-enwu gbaa kamakwa ọ ga-echebe gị pụọ na ụwa nke nsogbu akpụkpọ ahụ.
Q Kedụ ka mmadụ ga-esi mee ka anụ ha na-enwu kwa ụbọchị?
.B.. Dịka e kwuru n'elu, ịmịpụta mmiri na ịmịkọrọ mmiri bụ isi. Otú ọ dị, ị ka nwere ike iche ọtụtụ nsogbu akpụkpọ ahụ ma ọ bụrụ na ị naghị elekọta onwe gị na ịgbaso ndụ na-adịghị mma. Offọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa ị ga-ebu n'uche iji nweta akpụkpọ ahụ na-enwu gbaa bụ na ịchọrọ ị toụ nnukwu mmiri, ruo na nri gị, na-emega ahụ kwa ụbọchị. ma bechaa nri eghe na ise anwụrụ.
Ọzọkwa Gụọ: Mma Nzuzo Maka Agba anụ
Categories Ndị Ọzọ Ntutu Isi Enyi Na Ezi Na Ụlọ
esi tufuo ntutu ihu ihu igwe
sophie Turner jean isi awọ
adam sandler sere barrymore
Hollywood Movies nke Hollywood
ndakọrịta kacha mma maka nwanyị na-amaghị nwoke
soda maka akọrọ akpụkpọ